कम्युटरबाट आखाँलाई बचाउने पाँच उपाय » Khulla Sanchar
कम्युटरबाट आखाँलाई बचाउने पाँच उपाय
एजेन्सी : तपाईँ सधैँजसो कम्प्युटरमा लामो समयसम्म व्यस्त रहनुहुन्छ भने सचेत रहनुहोस् । त्यसबाट तपाइृँको आँखामा नकरात्मक असर पर्न सक्छ । कम्युटर, मोवाइल, ट्ब्लेटको बढ्दो प्रयोगले मानिसहरुमा आखाँ सम्बन्धि विभिन्न समस्या पनि थपिएका छन् । एक सर्वेक्षणका अनुसार ९० प्रतिशत कम्युटर प्रयोगकर्ता आखाँमा कुनै कुनै प्रकारको समस्या हुन्छन् । आखाँबाहेक कम्युटरकै प्रयोगले अरु समस्या पनि आएका छन् । जस्तो धमिलो दृष्टि, टाउको दुख्नु र गर्दन दुख्नु आदि ।
यी समस्याबाट बच्न चिकित्सकहरुले केही सुझाब दिएका छन् ।
१. कम्युटरमा हेर्ने कोण समायोजन गर्नुहोस :
तपाईको आखाँ र कम्युटर बिचको कोण र दूरीले यस्ता समस्यामा मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । सबैभन्दा उपयुक्त मनिटर, मोवाइल र ट्ब्लेट आखाँबाट २० देखि २८ इन्ज पर हुनुपर्दछ । र आखाँको तह ९उचाई० भन्दा ४ देखि ५ इन्च तल हुनुपर्दछ । यो उपायले गर्दन दुख्ने समस्याबाट पनि मुक्ति मिल्छ ।
२. चमक घटाउँनुहोस :
३. आखाँलाई आराम पनि दिनुहोस :
४. आखाँ झिम्काउनुस :
५. समय–समयमा आखाँको जाँच :
त्यसबाहेक कम्युटर प्रयोग गर्दाले चस्मा लगाउनु पनि राम्रो मानिन्छ । अरु समयमा चस्मा नलागएपनि कम्युटर प्रयोगको समय चस्मा लगाउदा आखाँ सम्बन्धि समस्या कम गर्न सकिन्छ ।